Buckles Manufacturers & Suppliers - China Buckles Factory
Ike Arc Side Hapụ nkechi High Quality
Ngwurugwu achicha dị ike nke eji akwa plastic nchara POM na-akpụzi. The ngwaahịa nwere kpọmkwem ebu oghere, ntị zuru ezu, ezi udidi, na ezi ike ọdụdọ. Kwesịrị ekwesị maka akpụkpọ ụkwụ, uwe, akpa, ngwaahịa ndị dị n'èzí na ụlọ ọrụ ndị ọzọ.
Nọmba ụdị: SB017
nkọwapụta: 0.75 * 1 * 1.25 * 1.5 * 2
Pesdị: Arc dị ike ịhapụ njigide
Atụmatụ: Mgbatị ọma na ike na-adọta ike
Bag paaki Ngwa Plastic Hapụ nkechi
Nhazi zuru oke zuru oke, ọrụ ka mma. A buckle ngwaahịa na patent asambodo. Adabara njem akpa, ugwu akpa, nchekwa akpa, nchekwa okpu agha, Pita leashes, wdg Ike na inogide, adịghị mfe eyi.
Nọmba ụdị: SB141-B
Dị: Akụkụ dị ike nke ịhapụ akwa
Patented High-quality Plastic Hapụ nkechi
Akpa na asambodo patent, ogo dị elu na imepụta nke mbụ, ga-ewetara gị ezigbo onye ọrụ ahụmahụ. Ọ nwere ike zuru oke dakọtara na akpa azụ, akpa aka, uwe, okpu agha na ngwaahịa ndị ọzọ mepụta ngwa ahia zuru oke.
Nọmba ụdị: SB141-A
Environmental Protection plastic POM Hapụ nkechi
Egwuregwu eco-friendly nke ihe plastik dị elu enweghị ihe ndị na-emerụ ahụ na ahụ mmadụ, enwere ike iji ya mee ihe maka akpa azụ, akpa njem, uwe, okpu agha na ihe ndị ọzọ. Ọ bụ nke adịghị egbu egbu ma ọ nweghị isi pụrụ iche, ọ gaghị emetụta ahụike mmadụ.
Style nọmba: SB136
nkọwapụta: 0.75 * 1 * 1.5mm
Pesdị: Arc dị ike ịhapụ ntọhapụ
POM Plastic ikechi akpa n'uwe Ngwa
Nnukwu, ibu, ukwuu amị ikike, ezigbo onye na-enweghị burrs. Mmepụta dị mma dị mma na-enye gị ohere ịzụta na ntụsara ahụ ma jiri nkasi obi. Nhọrọ kachasị mma maka ngwa maka akpa na akpa. Wetara gị ezigbo ahụmịhe onye ọrụ.
Nọmba ụdị: SB134
High Quality Oké Buckle akpa Bag Ngwa
Nhọrọ nhọrọ kachasị mma maka ngwaahịa dị iche iche dịka akpa, akpa akpa, akpa njem, okpu agha, akpa akwa, na leashes anụ ụlọ. Elu àgwà, na-eyi ndị na-eguzogide, oké ekwedo na ike ike ọdụdọ bụ àgwà ya.
Nọmba Style: SB125
nkọwapụta: 0.75 * 1 * 1.5
POM High Quality Arc Side Hapụ Akpa akpa
Ejiri ihe POM dị elu, jiri akwa na ike dị ike. Inogide na adịghị mfe afọ. N'ịnabata usoro ịmepụta otu akụkụ, ọnụ nke eriri ahụ gbara gburugburu ma dị mma n'emeghị aka gị. Ihe mkpuchi dị na ya adịghị mfe imebi.
Nọmba ụdị: SB032
POM Ike Nchedo gburugburu ebe obibi
A na-eji eriri POM dị elu nke nchekwa nchekwa, nke na-emetụ gburugburu ebe obibi ma na-adịgide adịgide, ọ dịghịkwa mfe imebi. E jiri ya tụnyere plastik ndị nkịtị, ọ na-agbanwe agbanwe ma nwee ụdị zuru oke iji gboo mkpa gị dị iche iche. O nwekwara ike inye gị ọrụ ndị ahaziri iji mepụta ngwaahịa nke gị.
Style nọmba: SB015
A dị ike n'akụkụ itinye usoro nkechi, ezi ekwedo, ike Anam Udeme ike, ike na inogide, adịghị mfe ịda, zuru ezu nkọwa, oké na gburugburu. Adabara akpa ugwu, akpa njem, okpu agha, wdg.
Nọmba Style: SB011
Ike Buckle Travel Bag Mountaineering paaki akpa akwa
Ejiri POM mee ya nke oma. E jiri ya tụnyere ihe plastik ndị nkịtị, ọ nwere ike ike na ike karịa. O nwere ngwa di iche-iche, odi nma, adighi nfe. Okwesiri maka akpa njem, akpa akwa, akpa akwa, okpu agha, wdg. Inddị ngwaahịa.
Nọmba Style: SB014